SIDA LOOGU CODSADO DEYN GANACSI OO YAR 10 TALAABO OO FUDUD -
Bogga ugu weyn SIDA LOO CODSADO DEYN GANACSI OO YAR 10 TALLAABO OO FUDUD
Hagaag, markaa waxaad go'aansatay inaad deyn u dalbato meheraddaada yar; Waa inaan kugu ammaanaa inaad qaadday mas'uuliyaddan weyn si aad u hubiso in ganacsigaagu guuleysto. Laakiin waa inaan kuu digaa, dalbashada amaahdu maahan ciyaar carruur mana sahlanaan doonto xitaa ganacsatada khibradda leh; oo malahayga ayaa ah sababta aad halkan u joogtid si aad u raadsato tallaabooyin aad qaaddo, waxyaabaha la sameeyo iyo waxa la sameeyo.
Waa hagaag ha welwelin, waad i weydiin kartaa agtayda (qosol) Waxaan siiyaa sida ugu fiican mowduucyada iyo sida loo dalbado amaahda ganacsiga yaryar maahan mid ka reeban.
Aan idiin oggolaado qiyamka ku xardhan maqaalkan; dib -u -habeyn ku sameeya amaahda ganacsiga yar yar iyo kuwa wax amaahiya, sida loo codsado amaahdaas 10 tallaabo oo sahlan, iyo waxyaabaha la sameeyo iyo waxa la sameeyo ee codsiga amaahda.
Hadda, kuwani waxay noqon karaan waxaad ka hesho meelo kale, sababta maqaalkani kuugu habboon yahay waa haddii aad raacdo waxa ku jira qoraalkan oo aad ku dhaqantid, waxaa laguu dooran doonaa deynta.
Waxaan rabaa in ganacsigaagu guulaysto waana sababta aan tan u qoray, waanan ogahay inaad rabto in ganacsigaagu guulaysto waana sababta aad u akhrin doonto maqaalkan ilaa dhammaadka. Miyaanay ahayn sababta aad halkan u joogto?
Amaahdu waa amaahda lacag uu qof ama ganacsigu siinayo shaqsi kale ama meherado uu deyn -bixiyuhu dulsaar ku bixinayo maamulaha ilaa dib -u -bixinta la dhammaystiro.
Qandaraas sharci ah ayaa isku xira labada dhinac iyo dokumentigu wuxuu noqon karaa mid onlayn ah ama mid offline ah iyadoo ku xidhan ilaha amaahda. Amaahda ganacsiga waxaa si gaar ah loogu talagalay ujeeddooyin ganacsi.
Dalbashada deymaha waxay u baahan tahay shaqooyin badan oo warqad ah; ilaa xad, waad wareersan kartaa. Yaa ku wareersanayn? Waxaad kormeeraysaa ganacsi halgan leh oo u baahan qulqul lacageed si uu u sii socdo, waxa ugu dambeeya ee aad awoodi doontid inaad kala soocdo waa warqad ka timid qolalkaaga.
Nasiib darro, kuwani waa waraaqo aad u baahan tahay inaad hesho oo aad kala soocdo waxaanan ku tusayaa waraaqaha aad helayso, sida loo kala saaro; in marka aad soo gudbiso codsigaaga, aad bangigaaga ka sugi doonto digniin amaah.
1 STEP: Halkee ku aragtaa naftaada 5 sano gudahood?
Waxaad la yaabi doontaa haddii aad ku jirto wareysi si aad u hesho su'aashaan oo kale. Haa, waad tahay Amaahiyahaagu wuu ku weydiin doonaa waana inaad bixisaa jawaab ka hor inta aysan weydiin su'aasha. Qorshahaaga ganacsi ayaa u sheegi doona amaahiyeyaashaada meesha shirkaddaadu joogi doonto 5 sano kadib.
Ma jiro deyn -bixiye doonaya inuu lacag amaahiyo meherad aan berri halkaas joogi doonin maadaama amniga maamulahooda iyo dulsaarku ay tahay sababta kaliya ee ay halkaas u joogaan inay ku soo xaadiraan.
Qorshahaaga ganacsi ku soo daabac, ha ahaato sida ugu cad ee suurtogalka ah iyada oo xoogga la saarayo socodka lacagta iyo jiilka.
Qorshahaaga ganacsi waa inuu sidoo kale ka jawaabaa su'aalaha kale ee amaahiyahaagu xiisayn doono sida:
Maxaad u rabtaa inaad deynta hesho?
Maxaad qorshaynaysaa inaad gaadho haddii aad hesho?
Intee in le'eg ayaad u baahan tahay si aad u fuliso qorshahan?
Maxaad ku samayn doontaa lacagta haddii aad hesho?
2 STEP: Warso gargaar
Waan hubaa inaad si fiican u taqaan ganacsigaaga, sidoo kale waxaan hubaa inaadan wax badan ka aqoonin amaahda iyo codsiyada amaahda waana sababta ay tahay inaad u weydiiso khubaro sida loo sameeyo iyo waxa la sameeyo; oo qiyaas waxa, gabi ahaanba waa bilaash.
Maxaa ka nasiib badan qof diyaar u ah inuu lacag ku amaahiyo iyagana waxay rabaan inay ku baraan sida lacag looga amaahan karo. Dhammaan khilafadu waa dhinacaaga waana bilaash. Markaa la xiriir amaahiyayaashan si aad uga hesho talooyin khabiir ah oo ku saabsan amaahda aad doonayso inaad qaadato.
Amaahda maamulka ganacsiga yar -yar (SBA) ayaa adeeggan ku siisa lacag -la'aan deymaha ku jira qaybtooda.
Tallaabada labaad ee ku saabsan sida loo codsado amaahda ganacsiga yaryar 10 tallaabo oo sahlan ayaa ah in la helo caawimaad.
3 STEP: Soo hel oo buuxi dulduleeladaada maaliyadeed
Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay waxa ay tani tahay, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in dhaqaalaha meheradda halganka iyo milkiiluhu uu mar walba ku jiro qas.
Hagaajin gaaban halkan, si dhakhso leh u hagaaji, ka hor intaadan ogaanin, dhibcaha dhibcahaagu mar horeba way burbureen. Waxaad dooneysaa inaad ogaato xaaladda caafimaadka maaliyadeed ka hor intaadan hor imaan deyn -bixiye, markaa hubi koontadaada shaqsiyeed iyo tan ganacsi labadaba.
Hel dhibcaha dhibcahaaga; raadso deymahaaga kaa maqan, hantidaada, iyo hantida shirkaddaada.
Tan ugu muhiimsan, waxaad u baahan tahay inaad kala soocdo meheraddaada koontadaada. Waxaad ogaan doontaa waxyaabaha u baahan hagaajinta koontadaada oo laga yaabee inaad u shaqeyso iyaga gaar ahaan dhibcaha dhibcahaaga.
Waa maxay sababta dhibcaha dhibcaha? Dhibic caafimaad qabta (oo ka sarreysa 670) ayaa muujinaysa caafimaad maaliyadeed oo wanaagsan tanina waxay u oggolaan doontaa amaahiyeyaasha inay si degdeg ah u siiyaan amaahdaada dulsaar hoose.
Si kastaba ha noqotee, dhibcaha dhibcaha xun ayaa sidoo kale la siiyaa waqtiyada, kaliya ogow in xaddiga aad heli karto uu yar yahay oo dulsaarka dulsaarku uu aad u sarreeyo.
4 STEP : Baadh amaahiyahaaga
Tolmadii waqtiga badbaadisay sagaal ayaa ah waxa maskaxda ku soo dhaca markaan ka fikiro cilmi -baarista. Ogaanshaha ku saabsan amaahiyeyaashaada ayaa kuu oggolaan doonta inaad xooggaaga xoogga saarto amaahiyahaas gaarka ah ee ku habboon biilkaaga.
Helitaanka amaah -bixiyeyaasha jira waxay wax weyn ka tari doontaa hagaajinta fursadahaaga deyn.
Qaar ka mid ah deyn -bixiyayaasha waxaa ka mid ah:
Bangiyada: waxay bixiyaan amaah waxayna noqon karaan ikhtiyaarkaaga raadintaada, in kasta oo ay leeyihiin siyaasad adag oo qaar badani u baahan yihiin dammaanad.
Ururada amaahda/ Ururada iskaashatada: ururadan ayaa bixiya amaah kaydsigooda, inkasta oo ay leeyihiin barkad yar marka loo eego bangiyada. Sidoo kale ma shaqaaleeyaan adeegsiga teknolojiyada taas oo hoos u dhigaysa geedi socodka codsiga iyo bixinta.
Amaahda SBA: kani waa hay'ad sharciyeed oo Mareykan ah oo aan lacag deynin laakiin u adeegta sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya amaahiyayaasha iyo kuwa wax amaahda. Waxay leeyihiin ikhtiyaar deyn oo weyn 504 iyo microloans.
Barnaamijka ilaalinta mushaharka: imaatinka Covid-19 wuxuu burburiyey dakhliyo ganacsi oo badan iyo si looga fogaado shaqaale aad u tiro badan oo shaqada laga cayriyo, dowladda Mareykanka waxay soo saartay ikhtiyaarkan 2020 si ay u caawiso meheradaha la halgamaya bixinta kirada iyo mushaharka. Waxaad eegi kartaa haddii ikhtiyaarkani kuu shaqeynayo iyo in kale.
Maalgelinta qaansheegta ama warshadaynta: Tani waxay ku lug leedahay adeegsiga qaansheegtaada aad leedahay si aad deyn uga hesho amaah -bixiyeyaasha. Waxa aan leeyahay waa haddii hal shirkad ay ku leedahay shirkaddaada lacag iibsi wanaagsan ama adeegyo la bixiyay; waxaad ku amaahan kartaa lacag warqaddooda ballanqaadka oo aad dib u bixin kartaa deyn -bixiyayaasha marka deyn -bixiyayaashu ku siiyaan.
5 STEP: Diyaarso faylkaaga arjiga
Tallaabadan ayaa ah tallaabooyinka kor ku xusan, oo wax kasta oo kore isku wada daray:
Diyaarso dokumentigaaga diiwaangelinta iyo aqoonsiga canshuurta.
Soo hel dhibcaha dhibcaha ee kaararkaaga amaahda ee shaqsiyeed iyo kan ganacsi
Diyaarso dukumentiyada soo socda:
Qoraalada maaliyadeed ee shaqsiyeed
Kaarka Aqoonsiga Shaqsiga
6 STEP: Dammaanad
In kasta oo qaar ka mid ah amaahiyayaashu aysan u baahnayn dammaanad, bixinta ikhtiyaarrada dammaanad -qaadka ayaa ah odhaah u -jeedinta deyn -bixiyayaashaada waxayna u socon doontaa waddo dheer si ay uga dhaadhiciso inay ku siiyaan amaahda.
Hantidaada shirkadeed iyo mararka qaarkood hantida shaqsiyeed (in kasta oo aan lagu talin karin; laakiin mar haddii aad gacmahaaga saarto warqad adiga oo wakiil ka ah shirkaddaada, sidoo kale waxaad mas'uul ka tahay haddii shirkaddaadu khaldan tahay) waa in la diiwaangeliyaa.
7 STEP: Intee in le'eg ayaad u baahan tahay?
Wax kasta oo aad samayso, waa inaad ogaataa inta aad u baahan tahay markaad deyn codsanayso. Waa inaadan noqon sida: 'haddii aan arko $ 10,000 waan qaadan doonaa oo haddii ay tahay $ 20,000 waxba igama gelin doono sababtoo ah deyn -bixiyayaashaadu waxay rabaan tallaabo ula kac ah.
Sidee ku ogaan doontaa xaddiga saxda ah ee aad u baahan tahay? Adigoo socodsiinaya liis ku saabsan waxa meheraddaadu u baahan tahay lacagta;
Miyaad abuureysaa badeeco cusub? Qaado saamaynta kharashka
Ma ku leedahay shaqaalahaaga? Waa imisa?
Ma u baahan tahay qalab cusub? Hel qiimaha
Deyn -bixiyeyaashu had iyo jeer waxay ku siin doonaan amaah haddii ujeeddadaadu tahay inaad dakhli badan soo saarto maxaa yeelay waxay og yihiin inaad ka bixin karto hawshaas.
8 STEP: Ku quuso!
Diyaar uma noqon kartid dalabka amaahda oo haddii aad raacday tillaabooyinka kore xagga warqadda, waxaad diyaar u tahay inaad dalbato amaah, markaa aan quusno.
Jadwal u samee booqashada deyn -bixiyeyaashaada tooska ah ama booqo websaydhka iibiyahaaga internetka si aad u dalbato dalabkaaga.
Had iyo jeer la xaajood amaahiyeyaashaada haddii aad hesho dalab, ka gorgortan sicirka, muddada, iyo xitaa qaddarka. Isbarbardhig shuruudaha haddii aad ka hesho wax ka badan hal dalab deyn -bixiyayaashaada.
9 STEP: Sugitaanka…
Deyn -bixiyeyaasha kala duwan waxay leeyihiin waqtiyo kala duwan codsiyada amaahda inta lagu gudajiro kuwaas oo ay qabtaan shaqadooda ah inay maraan dukumiintiyadaada iyo soo jeedintaada.
Had iyo jeer tixgeli waqtiga aad haysato amaahda maaddaama tani ay go'aamin doonto deyn -bixiyeyaasha aad dooratay.
Baahida deg -degga ah ee deymaha ayaa kuu wareejin doonta deyn -bixiyayaasha internetka oo leh waqti ka -baaraandegitaan oo gaaban halka laga yaabo inaad booqato bangi haddii amaahda aad u baahan tahay ay aad u badan tahay.
Haddii aad ka hesho wax ka badan hal dalab deyn -bixiyayaasha; taas oo aad suurtogal u ah haddii aad raacdo tillaabooyinkan, tallaabada ugu dambaysa waa inaad isbarbar dhig ku samayso amaah -bixiyeyaasha, muddada, ujrada ganaaxa, kharashka maamulka.
Ganacsigaagu wuxuu u baahan yahay amaahda, si kastaba ha ahaatee, waa inaadan qaadin culeys aan loo baahnayn haddii aad haysato ikhtiyaar deyn oo aad aqbasho. Isbarbar dhig oo aqbal kan ugu roon.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Sida loo codsado amaahda ganacsiga yaryar 10 tallaabo oo fudud
Waa maxay tillaabooyinka lagu helo deyn ganacsi?
Ogow inta lacag ah ee aad u baahan tahay
Go'aanso nooca amaahda ugu habboon baahidaada
Hubi dhibcaha dhibcahaaga
Isu keen dukumentiyada loo baahan yahay
Qiimee qiimaha dammaanaddaada
Ka dukaameyso shuruudaha amaahda ganacsi ee ugu fiican
Codso amaah ganacsi
Dhis dhibcaha dhibcaha shakhsiga iyo ganacsiga. Dhibcaha amaahda shaqsiyeed waxay muujinayaan awoodda aad u leedahay bixinta deymaha shaqsiyeed, sida kaararka deynta, amaahda baabuurka, iyo amaahda guryaha
Ogow shahaadooyinka iyo shuruudaha ugu yar ee dayn -bixiyaha
Aruuri dukumentiyada dhaqaalaha iyo sharciga
Samee qorshe ganacsi oo xooggan
Ma adagtahay in la helo amaah ganacsi?
Way adag tahay inaad u qalanto amaah ganacsi oo yar oo leh dhibco dhibco oo ka hooseeya 700.… Si aad u hubiso dhibcaha dhibcaha ganacsigaaga, la xiriir Equifax, Experian, iyo Dun & Bradstreet. Intaa waxaa sii dheer, waa inaad dhistaa dhibco dhibco shaqsiyeed oo xoog leh oo aad hoos u dhigtaa deyn kasta ka hor intaadan dalban deyn ganacsi
Waa maxay amaahda ugu fudud ee SBA ee la helo?
Microloans -ka SBA
Mudo intee leeg ayay qaadataa in lagu ansixiyo amaahda ganacsiga yar?
Dhammaan habka amaahda SBA guud ahaan waxay qaadataa qiyaastii 60 ilaa 90 maalmood. Marka la barbardhigo amaahda kale ee ganacsiga yar yar iyo badeecadaha kale ee maalgelinta, waxay qaadan kartaa in muddo ah in la xidho amaahda SBA sababta oo ah baaxadda waraaqaha iyo dokumentiyada aad u baahan tahay inaad bixiso
Aqbal hambalyadayda mar hore si aan u xaqiijiyo amaahdaan aadka muhiimka ugu ah ganacsigaaga. Si fiican baad wax u qabatay oo waxaad u baahan tahay dhabar dhabarkaaga si aad u dadaasho.
Anigu ma ixtiraamayn markii aan idhi waan garanayaa basashahayga marka ay timaaddo sida loo codsado amaahda ganacsiga yaryar 10 tallaabo oo fudud.
Iminka waa adiga inaad isticmaasho kuwan waxaanan ku qiyaasi karaa inaad 3 dalab ka hesho arjigaaga koowaad. Ma u malaynaysaa in taasi tahay buunbuunin? Maxaad u codsan weydaa oo aad u aragtaa…
Tuug: Talaabooyin Fudud Oo Lagu Helo Amaahda Ganacsiga Yaryar
Forbes: 10 tillaabo oo muhiim u ah helitaanka deyn ganacsi oo yar
Raasamaal degdeg ah: Dalbashada deyn ganacsi
Ondeck: Codsiyada onlaynka ah Amaahda Ganacsiga Yaryar
Raasamaalka ganacsiga qaranka: Sida loo helo amaah ganacsi oo yar-yar oo ah 5- talaabo